काँग्रेस अनशन कि महाधिवेशनमा ? - Parichaya.com
काँग्रेस अनशन कि महाधिवेशनमा ?
By परिचय	 On १६ श्रावण २०७८, शनिबार ११:४७ 0
आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । महाधिवशेन महामारीको मारमा पर्ने छनक देखिएको छ । महिनादिन बाँकी रहँदासम्म आन्तरिक उल्झन र विवाद सुल्झाउन नसक्दा कार्यकर्ताको उत्साहमा कमी आएको छ । महाधिवेशन पार्टीको नेतृत्वदेखि नीति तय गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । नेपाली काँग्रेस पूरानो र जेठो पार्टी त हुँदै हो, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूलमन्त्रमा अगाडि बढेको दल हो । काँग्रेसले राजनीतिमा ७० वर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ । काँग्रेस गठन हुँदा जन्मिएको बालक पनि आज ७१ वर्ष पुगिसकेको छ । पाका र परिपक्व नेताको काँग्रेसमा कमी छैन् ।
काँग्रेसको किचलो सनातन शैलीमा चलिरहेको छ । मारपिट, विवाद, विरोध, वहिष्कार अनशन, आदि इत्यादिका नाटक मञ्चन भइरहेका छन् । क्रियाशील सदस्यता विवाद यथावत रहँदा नै प्रतिवेदन तयार भएको छ तर सहमति कायम भएको छैन् ।
काँग्रेसको कुम्भ मेला १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिको विषयले किचलो उत्पन्न भएको छ । काँग्रेसको किचलो सनातन शैलीमा चलिरहेको छ । मारपिट, विवाद, विरोध, वहिष्कार अनशन, आदि इत्यादिका नाटक मञ्चन भइरहेका छन् । क्रियाशील सदस्यता विवाद यथावत रहँदा नै प्रतिवेदन तयार भएको छ तर सहमति कायम भएको छैन् । क्रियाशील सदस्यको संख्या ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ पुग्दा मुटुमा देश बोकेका युवाहरूको सघन उपस्थितिले काँग्रेसमा आशाका किरण देखिएको छ । ४० वर्ष उमेर समूहका २ लाख ३० हजारको हाराहारीमा सदस्य रहेका छन् । यसले काँग्रेसको भविष्यलाई उज्यालो दिएको छ । यद्यपि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी एवम् सिमान्तकृतहरू सोचे जस्तो समेटिएका छैनन् । नेपाली समाजको विविधतालाई काँग्रेसले विर्सिएको आभास भएको छ । नेपाली समाजसँग सम्वाद गर्न पनि समावेशीताको महत्वलाई नकार्न सकिदैन् । सामाजिक विभेद र असमानतालाई चिर्न पनि समावेशिता अपरिहार्य छ । पार्टी केवल शक्तिशालीहरूको प्रालि मात्रै होइन । आस्था र विचारको पुञ्ज हो ।
पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाका अभिव्यक्तिमा ‘हुन्छ’ भनिए पनि उनी स्वयम् दोधारमा छन् । कार्यकर्ताको ज्यानभन्दा महाधिवेशन ठूलो होइन भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । कोरोनाको महामारी देखाएर महाधिवेशन सार्नका लागि संवैधानिक जटिलता छ । कार्यकर्ताहरू भदौमा हुने महाधिवेशन पर्खिरहेका छन् तर कुन बेला के खबर आउने हो बेखबर छन् । विगतको फुर्सदिलो समय वर्वादीमा वित्यो । १७ महिना कानमा तेल हालेर बसेको काँग्रेस भदौ पर्खिदा अलमलमा परेको छ ।
महाधिवेशन निर्धारित समयमा होला भन्नेमा अझै संशय छ । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाका अभिव्यक्तिमा ‘हुन्छ’ भनिए पनि उनी स्वयम् दोधारमा छन् । कार्यकर्ताको ज्यानभन्दा महाधिवेशन ठूलो होइन भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । कोरोनाको महामारी देखाएर महाधिवेशन सार्नका लागि संवैधानिक जटिलता छ । कार्यकर्ताहरू भदौमा हुने महाधिवेशन पर्खिरहेका छन् तर कुन बेला के खबर आउने हो बेखबर छन् । विगतको फुर्सदिलो समय वर्वादीमा वित्यो । १७ महिना कानमा तेल हालेर बसेको काँग्रेस भदौ पर्खिदा अलमलमा परेको छ । सधैँभरि इतिहासको व्याज खाएर पार लाग्दैन् । काँग्रेसले आफ्नो ‘लिगेसी’ का लागि पनि विधि र प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । वैधानिकता जोगाउनका लागि विशेष महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारिएका छन् । जुन संवैधानिक संकट मोचनको उपाय भनिएको छ ।
क्रियाशील सदस्यको विवाद बढ्दै जाँदा जरुर पार्टीको राजनीतिक शाखमा धक्का लाग्छ । काँग्रेसको आफ्नै अनुहार छ, चाल, चरित्र र चेहरा छ, नयाँ काँग्रेसी अनुहारको खोजी गर्दा विवादका झिल्काहरू देखिएका हुन् । वडातहका क्रियाशील सदस्यसँग नेतृत्व तर्सने होइन समसाथ लिने हो । काँग्रेस गतिशील हुुनुको विकल्प छैन्, धमिलो पोखरी भएर जम्नु काँग्रेसका लागि घातक छ ।
नेपाली काँग्रेसको विधान र संविधानले दिएको सुविधा सकिएपछि संविधान संशोधनमा भन्दा महाधिवेशनमा जोड दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । महाधिवेशन संघारमा आइपुग्दा चुनौतीका चाङ भए पनि त्यसलाई संक्षिप्त कार्यविधि र प्रविधिको प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्न जाँगर चलाउनुपर्छ । क्रियाशील सदस्यको विवाद बढ्दै जाँदा जरुर पार्टीको राजनीतिक शाखमा धक्का लाग्छ । काँग्रेसको आफ्नै अनुहार छ, चाल, चरित्र र चेहरा छ, नयाँ काँग्रेसी अनुहारको खोजी गर्दा विवादका झिल्काहरू देखिएका हुन् । वडातहका क्रियाशील सदस्यसँग नेतृत्व तर्सने होइन समसाथ लिने हो । काँग्रेस गतिशील हुुनुको विकल्प छैन्, धमिलो पोखरी भएर जम्नु काँग्रेसका लागि घातक छ ।
पार्टी कब्जा गर्ने र सधैं आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने धङ्धङ्गीबाट नेतृत्व सजग हुनै पर्छ । हुन नसके आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा नोक्सान हुन्छ । पार्टीभित्र जालसाजी कायम रहेमा इतिहासले काँग्रेसले माफी समेत दिदैन् । काँग्रेस रामरमितामा मात्रै रमाएर हुँदैन जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । बालुवाटार, बूढानिलकण्ठ, सानेपाको भीडले मात्रै समग्र देशको चित्र देखाउँदैन् ।
पार्टीभित्रको गुट उपगुटभन्दा माथि उठेर निष्ठावान र इमानदार सदस्यलाई न्याय गर्नु नै काँग्रेसका छवि सुन्दर हुनु हो । पार्टी कब्जा गर्ने र सधैं आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने धङ्धङ्गीबाट नेतृत्व सजग हुनै पर्छ । हुन नसके आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा नोक्सान हुन्छ । पार्टीभित्र जालसाजी कायम रहेमा इतिहासले काँग्रेसले माफी समेत दिदैन् । काँग्रेस रामरमितामा मात्रै रमाएर हुँदैन जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । बालुवाटार, बूढानिलकण्ठ, सानेपाको भीडले मात्रै समग्र देशको चित्र देखाउँदैन् । पार्टी कार्यालय आन्दोलनकारीको अखडा बन्दा लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अनशन, धर्ना, मारमुङ्ग्रीले गलत सन्देश जान्छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा चरम धाँधली भएको आरोप कार्यकर्ताले गरेका छन् । समस्या सुल्झाउने जुक्तिको खोजीमा लाग्नुपर्छ ।
महामारीमा महाधिवेशन गर्नुभन्दा कार्यकर्ताको ज्यान जोगाउन लाग्नु पर्ने विचार सतहमा आएको छ । आम नेपालीलाई भ्याक्सिनको सुनिश्चितता भए पछि महाधिवेशन गर्दा वेश हुने जिकिर गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कारको मूल र मियो भनिएको काँग्रेसले अनुशरण गर्न लायक कामको थालनी गर्नुपर्छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा अब पनि आशा लाग्दा हुन सकेनन् भने केवल तस्विरमा मात्रै अंकित हुनेछन्, जनमनमा होइन । सत्ताभन्दा पार्टी बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । जनताका समस्यासँग साक्षत्कार गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले मुलुक र नागरिकका लागि भरपर्दो काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
दार्चुला घटनाविरुद्ध खबरदारी र स्वाधीनताको पक्षमा एकीकृत संघर्षका लागि वाईसीएलको आह्वान